Consumerism and environmentalism - inona izany?
Consumerism ary ny maha-zava-dehibe azy amin'ny fivarotana
Consumerism dia midika ho an'ny hetsika ho an'ny vahoaka sy ny fanjakana mba hanohanana ny zo sy ny fahafahan'ny mpanjifa amin'ny fifandraisana amin'ny mpamokatra, ny mpamatsy. Nipoitra ny foto-kevitra tamin'ny faramparan'ireo taona 1960, nisolo ny foto-kevitra iray hafa - "fitondrana mpanjifa". Ity dia karazana fivoarana avy amin'ny toekarena mpamokatra amin'ny toekaran'ireo mpanjifa.
Inona no atao hoe consumer?
Consumerism dia hetsika iray ao anatin'ny fiaraha-monina izay tanjona hiarovana, hanitatra ny zon'ny mpanjifa. Ity hetsika ity dia antsoina hoe Consumerism. Ny mpanjifa dia rohy manan-danja eo amin'ny rafitry ny fifandraisana ara-toekarena sy ara-barotra. Eo anelanelan'ny mpanamboatra ny entana, ny mpividy foana dia tsy mitovy hevitra, nanandrana nifehy azy ireo tamin'ny alalan'ny lalàna ny fanjakana.
Ao amin'ny filozofia, ny fanehoan-kevitry ny Consumerism dia manohitra ny famoronana ho toy ny foto-kevitra miaina. Ohatra, miasa amin'ny mpanjifa ny mpanjifa, ary miasa ho an'ny tombontsoan'ny olombelona ny mpamorona, noho ny fanatanterahana ny tenany , ny fahafaham-po ho an'ny faniriana kreôla. Na dia mandany ny fiainany aza ny mpamokatra, dia tsy ny tanjony, ny andriamanitra izany.
Eo amin'ny tontolo maoderina dia misy tranga roa no miseho:
ny fiorenan'ny filozofia momba ny mpanjifa;
ny fampandrosoana torolalana amin'ny famoronana.
Raha vao nahatakatra ny tenany ho "fitsipika ahy" ny olona iray, dia mihevitra ny tenany ho "zava-dehibe amiko" izy ankehitriny. Ho an'ny mpanjifa dia misy hetaheta ho an'ny zavatra tsy ilaina, ny faniriana hahazo marika fanta-daza. Rehefa mamorona entam-barotra tadiavina, fametahana famokarana, maro ny fitaovana ilaina, ilaina mba hamoronana zavatra tena ilaina. Vokatr'izany, ny indostria mamokatra zavatra ho an'ny fiainana dia very fahaverezana.
Consumerism dia hetsiky ny olom-pirenena manana tanjona hampivelarana ny zon'ny mpanjifa, ny fiantohana ny kalitaon'ny entana. Ny fahombiazana miankina mivantana miankina amin'ny ohatrinona ny vokatra, ny dokam-barotra, ny serivisy dia mifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny mpividy. Ny konsumerism sy ny maha-zava-dehibe ny fivarotana dia manana andraikitra lehibe. Raha toa ny mpanamboatra hahafantatra ny zavatra ilaina ho an'ny mpanjifa, inona no tena zava-misy marina, ilaina, dia hitombo tsikelikely ny vola miditra amin'ny orinasa:
Ny fahombiazan'ny orinasa rehetra dia miankina amin'ny mpanjifa, na te hividy zavatra, handoavana izany.
Mila mahafantatra ny filan'ny mpanjifa ny orinasa mialoha ny hanombohan'ny famokarana.
Ilaina ny mandinika tsy tapaka, mandinika ny zavatra ilain'ny mpanjifa.
Consumerism and environmentalism
Satria ho an'ny olona maro ny fandraharahana no heverina ho anton'ny loza ara-toekarena sy ara-tsosialy, dia nisy fiantraikany roa tao amin'ny fiarahamonina: ny Consumerism sy ny tontolo iainana, izay mikendry ny hanatsara ny toetry ny tontolo iainana. Ho setrin'ny tontolo iainana, dia namokatra vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana ny orinasa tamin'ny fametrahana fitaovam-pako. Ao anatin'ny fiarahamonina iray dia misy fitarihana toy ny konsyumerizatsija, tarihin'ny fampidirana fitaovana elektronika (tablette, finday) ao amin'ny rafitra elektronika amin'ny orinasa.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny mpanjifa dia dingana iray ahafahan'ny mpiasa mampiasa fitaovana enti-mampiasa fitaovana ho an'ny orinasa. Noho izany, ny mpiasa dia manana zo hisafidy manokana, aiza, ary amin'ny inona ny fitaovana entin'izy manao asa. Tsara izany, mampitombo ny famokarana sodina ary mamonjy fotoana .
Consumerism - ny fiheverana sy ny fiantraikany
Ireto ny tombontsoa manaraka amin'ny mpanjifa:
fizarana ara-drariny amin'ny mponina;
ny fidiran'ny mpanjifa amin'ny fampahalalana;
fandraisana anjara amin'ny fanapahan-kevitra;
fihenam-bidy ho azo ekena;
ny fampandrosoana paikady momba ny fiarovana ny tontolo iainana manerana an'i Eoropa.
Tsy azo sarahina ny mpanjifa sy ny fivarotana. Nefa ity hetsika ity dia afaka mahatsapa ny tenany ao anatin'ny fiarahamonina iray izay liana amin'ny olona izay vidiny ary maniry hiaro ny tenany amin'ny vokatra mendrika. Raha mitombo ny maha-zava-dehibe ny mpanjifa eo amin'ny tontolo maoderina, ity lalana ity dia afaka manova ny entana mendrika amin'ny tsena, ary ny mpamokatra azy ireo.
Fandaharam-potoan'ny andro fiasana
Famindrana taorian'ilay fandroahana
Fahalalahana ho an'ny mpandray anjara
Ahoana no hahazoana vola ho an'ny mpianatra?
Ahoana no hahazoany amin'ny fahavaratra?
Toe-panafody manoloana ny fikorontanana
Candles with adnexitis
Mamolavola tranonkala iray
Tablets ho an'ny sary fitifirana
Afaka mifangaro Horus sy Decis ve ianao?
Ny fandidiana vaginaly
15 fanontaniana malaza, valiny izay fantatry ny olona
Zhdun 2017 - meme izay naharesy ny tambajotra sosialy
Sarimihetsika tsara momba ny fanatanjahantena
Rowan bead - kilasy Master
Miakanjo miaraka amin'ny lolo
Teboka mitahiry isam-bolana
Ny renin'i Melanie Griffith dia nampiseho ilay "toe-javatra tsy mety" amin'ny fiaraha-miasa amin'i Alfred Hitchcock
Anita Lutsenko, fomba hanadiovana ny vavony?